Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Maxamed Cabdi Yusuf: Soomaaliyeey noqda shacab laga baqo, hadaad rabtiin dowlad wanaagsan!!! Waxay yidhaadeen naftiisa ha ka bilaabo, oo muxuu la hadhay waa yaab ee?!!
Maxamed Cabdi Yusuf: Soomaaliyeey noqda shacab laga baqo, hadaad rabtiin dowlad wanaagsan!!! Waxay yidhaadeen naftiisa ha ka bilaabo, oo muxuu la hadhay waa yaab ee?!!
Oct 06, 2015 ANALYSIS 0
Ka dib markii ay laba ruug cadaa, oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu da’da wayn, uguna daacadsan siyaasiyiinta Soomaalida, ahna waqtigan xaadirka ah laba xildhibaan, oo ka mid ah baarlamaanka dowlada federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaas oo kala ahaa Xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf, ay
Dhowaan ka soo muuqdeen shaashada TVga Universal, iyaga oo ka qayb gelaayay barnaamijka Dood Wadaag ee ka baxa TVga Universal, halkaas oo hadalo baraarujin ahaa, oo ay shacabka u soo jeediyeen, oo xaqiiqada iyo waaqaca dalkeena maanta ka jira ku saabsanaa, hadaladaas oo ay dhibsadeen sas iyo jaahwareerna ku riday dowlada
Federaalka ah, waxay ku kaceen talaabooyin qalafsan oo cubudhin ah, oo ay kaga hortegayaan, in ay warbaahintu baahiso xaqiiqada dalkeena ka jirta,waxa ay dowladu xidhay xaruntii TVga Universal ee Muqdisho, waxa ayna xabsiga u taxaabtay Weriyihii iyo barnaamij soo saarihii Telefishanka Universal Cawil Daahir Salaad iyo Abdullahi
Hersi, dabcan labada xildhibaan hadaanay xasaanad lahayn, iyagana xabsiga ayaa loo taxaabi lahaa, runta ay sheegeen awgeed, hadaba taageerayaashii dowlada ayaa iyana bilaabay, in ay tashuush ku furan hadaladii xildhibaanada, ee xaqiiqada iyo runta cad ku saabsanaa! Iyagoo ku andacoonaaya in ay iyagu horta ku kacaan, waxay shacabka ku
Boorinayaan, oo ay naftooda ka bilaabaan horta!! Hadaba is waydiintu waxay tahay, maxay labadan xildhibaan, oo ay da’doodu kor hada u dhaaftay 70 jiro, naftooda ula hadheen, oo ay naftooda horta ka bilaabaan waa yaabee?!! Ma dareemi karaan khatarta ay naftooda u bandhigeen, oo ay u keeni karaan hadalada runta ah, ee ay ummadda u soo
Gudbiyeen?!! Maxaase kale oo laga sugaayay, niman da’daas joogaa in ay ku kacaan?!! Dhab ahaan hadaladoodu way uga daran yihiin cida ay ula jeedaan xabad, bal iska daa xabad ee, odhana maayo madhaafiic ee, ee bal wuxuu hadalkoodu ka dhignaa sawaariikhda qaaradaha isaga gudubta, ee wax gumaada!! Wadankeena sida ay iyaguba
Sheegeen, waxaa ku sugan sirdoonka dowladaha reer galbeedka iyo kuwa deriskaba, waxay doonaan bay dalkeena ka samayaan, oo aanay dalalkooda ka samayn Karin! Mawadiniinteena ayay Jeelasha ku jidh dilaan, oo ku ciqaabaan, sidoo kale mawaadiniinteena ayay kay rabaan bartilmaameedsadaan, oo wadankeena ku dhex
Dilaan, sidoo kale dowlada ayaa iyana leh kooxa dadka laaya, oo khaarajiya cidii loo soo diro, marka khatarta intaa le’eg ayay labadan oday naftooda u bandhigeen, wadankooda iyo ummadooda awgeed!! imisa xildhibaan, oo ka horayay ayaa Muqdisho lagu khaarajiyay?!!! Bal u fiirsada hadaladooda ciida iyo dhagax dhaqaajinaaya! BAL se ay
Wax aad looga xumaado tahay, in aanu shacabka Soomaaliyeed dhaqaajinayn!!! (halkana ka daawo cajalad waa cidii aan hore u daawan ee), wuxuu yidhi Ra’iisal wasaare hore Xildhibaan Maxamed Cabdi Yuusuf: Waxa dalka qasaaya qolo la yidhaahdo beesha caalamka, oo wax ka ceshada dalkan aanay jirin, oo waxay rabaan iska
Samaynaaya, ayaa horta meesha taala, markaa hada anagu inaan dowlad nahay ayaan isu haysanaa, laakiin dowlad ma nihin, ee gun baan nahay Soomaali hadaan nahay!!! Dadkeena Soomaalidu waxay aaminsan yihiin inaan dowlad nahay! War dowlad ma nihin, adoon baan nahay, xoriyadeenii waa la qaatay, dalka inaan xorayno ayaa loo
Baahan yahay, gacanteena waxba kuma jiraan, waxa intaas sii dheer, dad la adeegsanaayo, oo lagu shaqaysanaayo, ayaa meel walba jooga, oo dadkeenii laga yeeshay, xaaladu halkaas ayay maraysaa. Soomaaliya maanta way dhimatay, way gowracantahay, cadawgeedii ayay gacanta ugu jirtaa, taariikh ahaan cadaw baanu
Weligayo lahayn, shirkii Berlin markii nala qaybinaayay, warbixintii nalaku qaybiyay, wuxuu ahaa midka hada nalaku wado, yaa warbixintaa keenay? Ingriiska ayaa keenay! Waxa keenay safiirkii Ingriiska u fadhiyay Abasiiniya, oo hada loo yaqaan Itoobiya, Baqalo iyo Fardo isaga oo wata, ayuu dhulkeena oo dhan maray, dabadeedna warbixin
Ayuu qoray, uu leeyahay qabaa’ilka geeska Afrika ka jira, waa qabaa’il isku nooc ah, oo aan waxba ku kala gedisnayn, oo isku dhaqan ah, oo isku af ah, oo isku midab ah,oo wada Muslim ah, oo weliba wada Shaafici ah, waxayna ku sii fidayaan Abasiiniya iyo Kiinya, dalalkaa ay ku sii fidayaana, waxaa kaga horaya dad aan diin lahayn, oo ay
Musliminayaan! Marka laba waxyaaboodba ha la yeelo, kow ha la xakamayo socodka ay sii socdaan, oo dib ha loo soo celiyo! Qodobka, labaad yaan dowlad qudha loo dhiibin ee, ha loo dhiibo dhowr dowladood, si loogu abuuro dhaqamo kala duwan! Waayo hal dowlad hadii loo dhiibo, ugu dambaynta hal mar ayay kacayaan, oo ay awoodooda oo
Dhan muuqanaysaa, markaa ha la kala googooyo, fikradaas ayaa maanta nagu socota inteenii soo hadhnay, marka waxa weeye anaga mashruuc ayaa nagu socda, mashruuca nagu socdaa waxa weeye, geeska Afrika iyo Soomaalida lama rabo, in ay dowlad micna leh ka dhalato, hadana waxa naloo adeegsanayaa waxa weeye, federaalka qabiilka ku
Salaysan, shakhsiyaad la adeegsanaayona, waa nalaka helay, oo rabaayad u ah gumaystaha, oo wax walba laga samaysanaayo, sidaas daraadeed marka waxa weeye, dadka dhalinyarada ah ee meelahan fadh fadhiya, ee wax dhegaysanaaya, anagu markaanu iyaga oo kale ahayn, waanu dagaalami jiray, Safaaradaha ayaan gubi jiray,
Magaalada ayaan burburin jiray, marka waa nalaga baqi jiray, oo codkayaga ayaa socon jiray, waxa lagu ciyaarayaana maanta mustaqbalka dhalinyarada, anagu odayaal baanu nahay, oo waqtigayagii waa soo dhamaysanay, marka yaan waqtigiina lagu ciyaarin, ee qabiilka aad u kala fadh fadhidaan, iyo qudhunka iskaga taga, oo Soomaalinimadiinii u
Soo laabta, oo dalkiina xoraya. Baarlamaanku eed ayuu leeyahay, shacabkuna eed ayay leeyihiin, baarlamaanku eed ayuu leeyahay, oo waajibaadkii laga rabay, sidii loogu tala galay uma fulin, ugamana shaqayn, shacabkuna eed buu leeyahay, oo shacab aan laga baqani shacab maaha! Anigu hada ka hor baan baarlamaanka ka hadlay, oo waxaan idhi:
Xukuumada iyo madaxtooyadu, waa in ay baarlamaanka ka baqaan, baarlamaankuna waa in uu shacabka ka baqaa! Shacab laga baqo waa la waayay!! Shacabka hadaan laga baqina, baarlamaana ma jiraayo, xukuumadina ma jirayso, nin waliba wuxuu rabo ayuu samaynayaa, Soomaalidu waxay ku maah maahdaa, waa maah maahyo duqah ee,
Soomaaliyi kal baqa ayay leedahay, ee kal xishooda ma leh, hadaan la baqin, oo shacabka indhihiisa iyo soo jeedistiisa laga baqin, nin walba wuxuu rabo ayuu samaynayaa! waanu idin iibsanaynaa baarlamaanka hadaan nahay, xukuumadu waxay rabtay samaynaysaa, madaxwaynuhu wuxuu rabuu samaynayaa, waxa weeye markaa, horta noqda shacab laga
Baqdo, oo aan loo soo dhowaan Karin, oo aan woxooda la taaban Karin, oo aan hantidooda la boobi karin , oo la dhici Karin noqda, oo midnimadii iyo sharafta ilaaliya, markaas ayaanu anuna baarlamaan fiican noqonaynaa, oo aanu idinka baqaynaa, oo idiin shaqaynaynaa, laakiin hadaad ii sacabinaysaan aniga oo tuug ah, oo aad leedihiin waa fiican yahay!! dee ana tuug baan noqonayaa waxaan doonaan xadayaa, waxaan doonona waan samaynayaa.
Xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa isna isaga oo saaxiibkiis u markhaanti furaaya yidhi: anigu waxan qabaa shacabka Soomaaliyeed baa reer hebel reer hebel u kala fadhiya, oo aan rabin in uu qaran noqdo, ee raba qabiil waliba intuu meel fadhisto, yidhaahdo dowlad baan ahay!! Anaa qiraaya, oo sheegaaya dalkani inuu gumaysi ku jiro,
Halkaa meeshii Ceel Jaalle la odhan jiray, anaga sow xildhibaano ma nihin, ma galno!! Ma geli karno!! Waxaa jooga tirada, waxaan markii dhowayd ka hadlay ciidamo Afrikaan ah ee, ciidamo reer galbeed ah, oo dal walba ciidan ka joogo!! Mana ogin waxay qabtaan, iyo waxay samayaan toona!! Ma naqaano! Awood baa lagu haystaa,
Markaa waxa weeye baarlamaanka uun maahee, shacabka Soomaaliyeed ayay u taalaa, iyagoo isku duuban, oo mid ah, in ay cid walba wejiga ka hor geeyaan, oo naga baxa yidhaahdaan, anigu maba garanaayo hada, dadka ciidamada jooga hada, cid kasta ha ahaadaan ee, dalka Soomaaliya waxay u qabtaan?!! wallaanan garan anigu!! ma garan!
Marka inaga oo dhan ayay inoo taalaa, maaha baarlamaan iyo madaxwayne iyo xukuumad iyo, inta la iloobo, dalkii halkaas ayuu yaalaa ee, sidaynu uga baxnaa?!! Shaki kuma jiro sidaan hada soo xusay in hadalada dhab ka-hadalka ah, ee labadan xildhibaan ay Buuro ka waawayn yihiin, ayna yihiin kuwa ciida iyo dhagax dhaqaajinaaya! BAL se
Ay wax aad looga xumaado tahay, in aanu shacabka Soomaaliyeed dhaqaajinayn!!! Tan kale cidina kama dalban in ay xabad qaataan, in kasta oo ay waajib tahay haday duruuftu keento, bal waxa laga dalbaday in ay is muujiyaan, oo ay dareenkooda iyo rabitaankooda cabiraan. In badan baa la qayliyay, war Baddii baa la iibsaday! War hantidii iyo
Khayraadkiinii baa shisheeye la siiyay, oo waa layna boobayaa! War ummadda kale ayaa laynku dhex beerayaa! War dhalintii iyo muwaadiniintii baa si sharci daro ah loo laynayaa! War ciqaab iyo jidh dil aan aduunka meela ka dhicin, baa jeelasheena ka jirta!War waa layna dhaxal wareejinayaan! War kelitalisnimo ayaa laynaku wadaa! War
Mashruucii reer Falastiin dhulka lagaga qaaday baa inagu socda! Shidanaaba shidan! In ay arimahaasu khusayaanba ma moodid! Shacabka Soomaaliyeed hubaal waxa keli ah ee kicin karaa, waa qabyaalad iyo reer hebel baa ina soo eegay! Reer hebel baa inagu soo durkay! Reer hebel baa inoo faanay, oo inoo tookhay! Reer hebel baan waxba inoo
Ogolayn, iyagaa wax walba inaga badsaday! Iwm, waa kuwaa hadalada dhiiga shacabka Soomaaliyeed dhaqaajiyaa, oo ay circa iyo dhulkaba u soo duminyaan awgiis! Waxan qormadan ku soo afmeerayaa tixdii caanka ahayd, ee abwaan Tima Cade Allaah ha u naxariisto ee, uu arinta maanta dalkeena ka taagan oo kale ka yidhi:
Dul iyo hoosba waan ugu dhigay waa dix dhagaxeede
Dubba madaxa wayskala dhacdaa daa’in abidkiise
Dugsi male qabyaaladi waxay dumiso mooyaane
Halkana ka daawada qaabka iyo nolosha, ay reer galbeedku inala rabaan, oo ay inoogu bedelayaan dhaqankeenii suubanaa iyo diinteenii samaaxada ahayd, ee wanaagsanayd, waa fusuqa iyo fawaaxishka maanta Muqdisho aafayay, waxa xusid mudan in ay halkaa muuqaalada aad aragtaan, ku sugan yihiin madax sare, oo dowlada federaalka ka tirsan!
Halkan ka daawo iyo weliba halkan.
Ciise Maxamuud Aadam
baarlamaan, Muqdisho, tuug, Waxay
Ciidamada Kacdoonka Galbeedka oo Xalay Weerar Kusoo Qaaday Gudoomiyaha Awdal iyo Dhimasho iyo Dhaawac ka Dhashay Ganacsade Caana oo Reer Borama ah Gurigiisa Ciidamada RRUdu u Daateen Maanta